I-Rosetta's Mission-Ending Landing kwi-Comet
U-Rosetta Ufumana I-Comet kufuphi
Umthunywa weRosetta , i-European Space Agency yombutho owawujikeleza i-nucleus ye-comet iminyaka emibili, yaphela ekupheleni kukaSeptemba 2016. Yenza "ukuthambeka" kokuhlaselwa kwi-core yenyuka yeComet 67P / Churyumov- Gerasimenko, ukuthatha imifanekiso kunye nedatha yonke indlela. Umfanekiso wokugqibela wemisebenzi ubonise "amatye" ebhantshi ebusweni obunokuba bukhulu betafile yekhofi. Ukugqitywa kokugqibela kwenzeka ngo-7: 19 nge-EDT ngoSeptemba 30, 2016, kwaye i-spacecraft eyayiyeka ukuthumela ekuhlaleni.
Kubonakala ukuba yonakaliswe okanye yonakaliswe kakubi.
Izazi zeenkwenkwezi zanquma ukuphelisa umsebenzi ngenxa yokuba kwakungenakwenzeka ukuba i-mission, eyayijikeleza i-nucleus, yayiyanele ngokwaneleyo amandla elanga ukuze iqhube phambili. Kwakungcono ukulawula ukufika / ukuqhuma, ngoko iqela lempomfa lenza iRosetta ngokuzala kwayo. Umkhwa wendawo waba enye kunye ne-comet kwaye iya kuqhuba ukukhwela i-nucleus njengoko i-comet ijikeleza i-Sun.
U-Rosetta Wasitshelani NgamaKomiti?
Umthunywa weRosetta wabonisa ukuba izazi zeenkwenkwezi zidibanisa izidumbu ezinzima. I-Comet 67P, njengamanye ama-comets, ngokwenene ibhola ehluthayo ye-ice grains kunye nothuli alunamathelwano kunye. I-nucleus eyenziwe nge-ducky ewela njengokuba i-comet ihamba ngokujikeleza kwayo i-Sun. Njengoko kwasondela kufuphi neLanga , i-comet yaqala "ukunciphisa" (njengokuba kwenzeka ntoni xa ushiya iqhwa elomileyo ngaphandle kwelanga).
Sekude kulwaziwa ukuba ezi zixhobo zeqhwa kunye nothuli zenziwe kwezinye zezinto ezidlulileyo kwi-system .
Ezinye zee-ices zenza kwangaphambili ukubunjwa kwelanga kunye neeplanethi. Oko kubenza baxabise iinqwelo ezinolwazi oluxabisekileyo malunga neemeko kwinkqubo yesantya yesantwa. Ekubeni asikwazi ukubuyela emva ngexesha lokubukela njengoko i-Sun kunye neeplanethi zethu zenziwe, ukufunda ices and dust and rocks in the comets isinyathelo esikhulu "ekubukeni" kwixesha elixakekayo kwimbali.
Izixhobo zombane weRosetta zenzelwe ukufundisisa i-ices kwi-Comet 67P kwaye uncede oososayensi baqaphele ukuba zininzi zezihlobo zeqhwa le-comet. Baye bafumanisa inkcazelo ebalulekileyo kwimvelaphi yamanzi eMhlabeni. Kwangexesha elide, abantu nangona kunjalo amanzi amaninzi eMhlabeni aphuma kwiidemon njengoko zaphazamiseka kwiplanethi yomntwana. I-Comets mhlawumbi idlala indima ethile, kodwa uRosetta wanquma ukuba u-comets ofana no-Comet 67P mhlawumbi akazange afake igalelo lwamanzi ukuze adale ulwandle lwasemhlabeni. Bayazi njani oku? Kukho ulwahlulo oluncinane lwamakhemikhali emanzini kwi-comet engabonakali emanzini eMhlaba. Nangona kunjalo, ezinye ii-comets zingaba negalelo, ngoko mhlawumbi uphando lwabanye luya kunceda abaphathi beenkwenkwezi bafumanisa indlela uMhlaba ufumana ngayo amanzi.
I-mission yayiye ikhathaza iindidi ezahlukileyo ezenza i-comet kwaye, ngokuyinene, ikhuphe umoya wayo. Kukho izixhobo ezingenangqondo kwi-nucleus, kuquka i-formadehyde, i-acetone, kunye ne-acetamide, kunye neengxube zothuli ezenziwe ngekhabhoni efana nezitye kunye namaminerali enza i-asteroids. Ukongeza kwi-carbon dioxide eqhelekileyo kunye negesi elalikulindeleke ukuba izazinzulu zilindeleke, zifumene i-amino acid glycie, kunye ne-molecular molecules i-methylamine ne-ethylamine.
I- Rosetta yezixhobo zeemoto ezikhethekileyo ze-chemistry "zanyusa" umoya we-comet ukuze zichonge ukuba zeziphi iindidi zegesi ezazivela kwi-nucleus. I-Comet 67P ijikelezwe ngumbhobho we-oksijini yee-molecular (ebizwa ngokuba yi-O 2 ). Oku akuzange kubonwe kwi-nucleus ye-cometary ngaphambili, kwaye kwakungalindelekanga ngenxa yokuba i-oksijeni yayinokutshabalaliswa njengokuba ilanga kunye neeplanethi zakha. Ukuze kubonakale kwi-nucleus ye-cometary kuthetha ukuba i-oksijini yayifakwe kwii-ices xa iimeko zipholile kwindlela encinane yelanga. Ubukho be-comet kwi -Outdoor Belt ye-Kuiper Belt kuthetha ukuba i-ices kunye ne-oksijeni efihliweyo yayigcinwa ngamaqondo okushisa "apho".
Nangona umsebenzi weRosetta usuphelile, inzululwazi eyanikezela ngexesha layo kwi-orbit malunga neCetet 67P isoloko ibaluleke kakhulu ukuba i-comet isayensi.
Kukho iminyaka yokuhlalutya okumelwe yenziwe ngokusebenzisa i-archives yedata ehlanganiswe ngumsebenzi. Eyona nto, singathumela iinqwelo ezinqamlekileyo ukuya kwezinye iindawo zokungena. URosetta wayeneminyaka ekwenzeni iminyaka, kwaye ezinye iinjongo zingenziwa ngokufanelekileyo. Kodwa, okwangoku, ukuhanjiswa kwee-worldlets ezincinci kuza kugxininisa kwi-asteroids, eziyizakhiwo zakhiwo zelanga . U-Rosetta usenokuba ngumqhubi wokuqala wokwenza uphando olude lwexesha elide, kodwa kwiminyaka ezayo, mhlawumbi ezinye iintlanganiso ziya kulandela ukukhokela kunye nomhlaba kwezinye iindawo eziza kufikelela kuMhlaba neLanga.
I-Comet yeHalley: Isivakalisi esivela kwiNzulu yeSolar System
Ukuhamba ngeSystem System: iPlanethi yoMhlaba
Ukukhangela i-Planethi ye-Ninth (okanye ye-10)
Indlela Yokujonga Ngokuphepha I-Eclipse Yelanga
Uhambo Ngendlela Yelanga: I-Planet Mercury
Nakhu Okumele Ukwazi NgoLanga
Chariklo: I-Asteroid yokuqala kunye neendandatho
Sunspots! Ziziphi Iindawo Ezimnyama Ngelanga?
Indlela yokusebenzisa umsebenzi we-VLOOKUP ye-Excel
Yenza ukukhanya kwiPolisi yeNtshonalanga
Iingxaki zeRuby NameIphutha: Iphutha eliqhelekileyo elingasetyenziswayo
Uyakwamkelwa kwiSikolo soMgqibelo: Indlela yokukhetha?
Iidayari zeMbali kunye neeNdaba ze-Intanethi
Ukuqhagamshelana neNgelosi Yakho Yokuqinisekisa: Ukuvavanya Ingcaciso Yengelosi
I-WrestleMania Iziphumo zomdlalo
Kuthetha ntoni ukuba 'inkululeko'?
Uluhlu lweAlfabhethi lweGemstones ezixabisekileyo kunye neeMpahla
I-Formula ye-Chi-Square Statistic
AbeLincoln kunye ne-Ax yakhe: Eyona nto iyenzeka emva kweLifa
Top 10 Monkees Iingoma
5 Iifom zokusebenzela zokubala eziPhakamileyo
I-Ins ne-Outs yokubala Iinjongo zokuThengisa iziThuthi kwiHockey
'Umgijimi Wemeko' kaYames Dashner - Imibuzo Yemibuzo Yemibuzo Yenqela
YaseSingapore isiNgesi nesiNgisi
Mesiya we-Handel - HWV 56 (1741)
Indlela yokudweba usebenzisa iMali yeNtloko yeNtloko